ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့်ကြားမှ တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုက ကြံ့ကြံ့ခံလျက်ရှိ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်း ယန်ဆန်းဆိပ်ကမ်းတွင် Libra of China's COSCO Shipping ၏ ကွန်တိန်နာ သင်္ဘောတစ်စင်းအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ မေ ၁၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုသည် ပြည်နယ်အဆင့်ဒေသများစွာ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်ပွားနေသော်ငြားလည်း ယခုနှစ် ပထမလေးလတာကာလအတွင်း ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်လျက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်ကို ဆက်လက်ထိန်းထားကြောင်း သိရသည်။ဇန်နဝါရီ-ဧပြီ ကာလအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ သွင်းကုန်နှင့် ပို့ကုန် စုစုပေါင်းမှာ ယမန်နှစ်ကထက် ၇.၉ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ကာ ယွမ် ၁၂.၅၈ ထရီလီယံအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း အထွေထွေအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနက မေ ၉ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့် ဖော်ပြရပါက ယင်းကာလအတွင်း ယမန်နှစ်ကထက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၉၈ ထရီလီယံ၊ ၁၀.၁ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ကာလ၌ သွင်းကုန်များမှာ ယမန်နှစ်ကထက် ၅ ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်၍ ယွမ် ၅.၆၁ ထရီလီယံအထိ မြင့်တက်လာခဲ့သလို ပို့ကုန်မှာလည်း ၁၀.၃ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ကာ ယွမ် ၆.၉၇ ထရီလီယံ တိုးတက်လာခဲ့ကြောင်း အချက်အလက်များ၌ ဖော်ပြထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံက ထိပ်တန်းကုန်သွယ်ဖက် သုံးနိုင်ငံဖြစ်သော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ အမေရိကန်တို့နှင့် ကုန်သွယ်မှုမှာလည်း တိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ ကာလအတွင်း ကုန်သွယ်ဖက်သုံးနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ တိုးတက်မှုနှုန်းများမှာ ၇.၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၆.၈ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၈.၇ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရှိခဲ့ကြောင်း အကောက်ခွန်ဌာန အချက်အလက်များအရ သိရသည်။
ထို့ပြင် ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာလည်း ပထမလေးလအတွင်း သွင်းကုန်နှင့် ပို့ကုန်မှာ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ယွမ် ၆.၁ ထရီလီယံအထိ တိုးတက်လာခဲ့သဖြင့် လျင်မြန်သောတိုးတက်မှုကို မြင်တွေ့ခဲ့ရကာ နိုင်ငံအတွင်း စုစုပေါင်း၏ ၄၈.၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၏ သွင်းကုန်နှင့် ပို့ကုန်များမှာ ၂.၂ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့သလို နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာလည်း ၁၄.၁ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာခဲ့သည်။
ပထမလေးလအတွင်း စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ တင်ပို့မှုမှာ ၆.၇ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း၏ ၅၇.၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ကြောင်း၊ အလုပ်သမားအင်အားအများအပြား အသုံးပြုရသည့် ထုတ်ကုန်များမှာလည်း ၉.၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဧပြီတစ်လတည်းတွင်ပင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ ယမန်နှစ်ကထက် ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ကာ ယွမ် ၃.၁၆ ထရီလီယံရှိခဲ့ကြောင်း၊ ပို့ကုန်အနေဖြင့်လည်း ယမန်နှစ်ကထက် ၁.၉ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာခဲ့ကြောင်း၊ ပို့ကုန်အနေဖြင့်မူ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်အကြာက ၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိရာမှ လျော့ကျသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လစဉ်အခြေခံအနေဖြင့်မူ တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုမှာ ယခင်လက ၁.၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ပြီး ပို့ကုန်၌ ၀.၆ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး သွင်းကုန်တွင် ၂.၅ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းသွားခဲ့သည်။
“တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုက တင်းကျပ်ပြီး ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်” ဟု နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် စီးပွားရေးအခြေအနေဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ Zhuang Rui က ပြောခဲ့သည်။
“အဓိက ပို့ကုန်မြို့တွေမှာ ကပ်ရောဂါ တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်ပွားမှုက ပို့ကုန်ကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတယ်” ဟု Hongta Securities မှ လေ့လာသူက သုတေသနစာတမ်းတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် တရုတ်၏ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုအပေါ် ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော နှောင့်နှေးမှုများမှာ ကပ်ရောဂါအား ဖြည်းဖြည်းချင်းထိန်းချုပ်လာနိုင်ကာ ပြည်တွင်းထောက်ပံ့ကွင်းဆက်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်နာလန်ထူလာသဖြင့် လျော့ပါးသွားလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သုတေသနစာတမ်းက အရ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် လီခဲ့ချန်သည် မေ ၅ ရက်က နိုင်ငံတော်ကောင်စီ အမှုဆောင်အစည်းအဝေး၌ သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်စဉ် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ထောက်ပံ့ကွင်းဆက်များ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကြားမှ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန် မူဝါဒအဆင့်များကို အသေးစိတ်ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေး၌ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု၏ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် လည်ပတ်မှု တည်ငြိမ်ရန်၊ အဓိကကျသော နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများစာရင်း စီစဉ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ထုတ်လုပ်မှု၊ ထောက်ပံ့သယ်ပို့မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်ဆောင်ရွက်မှုကို ပံ့ပိုးကူညီရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“စိတ်နှစ်မြှုပ်ထားတဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများမှာ ညွှန်ကြားချက်များကို ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ အဓိကကျတဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းအင်အားအများအပြား အသုံးပြုရတဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့ သွင်းကုန်၊ ပို့ကုန် တည်ငြိမ်ဖို့ လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ ဒါဟာ အလုပ်အကိုင် တည်ငြိမ်ရေးအတွက် အရေးပါတယ်” ဟု လီက အစည်းအဝေး၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Economic Watch: China’s foreign trade shows resilience amid pandemic
BEIJING, May9(Xinhua) — China’s foreign trade sustained resilience and growth momentum in the first four months of the year despite COVID-19 resurgences in many provincial-level regions.
In the January-April period, China’s total imports and exports expanded 7.9 percent year on year to 12.58 trillion yuan, the General Administration of Customs said Monday.
China’s trade with its top three trading partners — the Association of Southeast Asian Nations, the European Union, and the United States — maintained growth momentum.
During the period, the growth rates of China’s trade value with these three trading partners stood at 7.2 percent, 6.8 percent and 8.7 percent, respectively, customs data showed.
Private enterprises sawafast growth rate as imports and exports increased by 11 percent to 6.1 trillion yuan in the first four months, accounting for 48.5 percent of the country’s total.
In April alone, the country’s foreign trade volume edged up 0.1 percent year on year to 3.16 trillion yuan, with the exports up 1.9 percent year on year while imports dropping by2percent fromayear ago.
Onamonthly basis, China’s foreign trade contracted 1.5 percent last month, with exports down 0.6 percent and imports declining 2.5 percent.
“China’s foreign trade facesagrim and complex development environment,” said Zhuang Rui,aprofessor at the University of International Business and Economics.
“The resurgence of the pandemic in major export cities directly affected exports,” said analysts with Hongta Securities inaresearch note.
However, virus-caused disturbances to China’s foreign trade will diminish as the pandemic is gradually brought under control and domestic supply chains and industrial chains recover, according to the note.
“Dedicated efforts should be made to retain orders and stabilize imports and exports of key industries and labor-intensive processing industries. This is crucial to stabilizing employment,” Li said at the meeting. ■
Photo : Aerial photo taken on Oct. 13, 2021 shows the container ship Libra of China’s COSCO Shipping at Shanghai Yangshan Port, east China. (Xinhua/Fang Zhe)